Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Nausea and Vomiting (2) ပျို့ချင်-အန်ချင် (၂)
Nausea and Vomiting (2) ပျို့ချင်-အန်ချင် (၂)
I am female, 23yrs old, single. I got vomiting since last 8 months ago. The investigations i have done are CP, ESR, LFT, USG, T3,T4, TSH, U&E, Stool RE, CEA, HBV, HCV, Retro, the results are normal. I have been taking Omeprazole and antacid for2months. I had Gastroscopy last week. The result was mild Antrum gastritis. I want to know when i will get clear symptoms.
ပျို့ချင်-အန်ချင်တာဟာ ရောဂါတခုခုရဲ့ လက္ခဏာသာဖြစ်တယ်။ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ အန်ချင်တာကို အကြောင်းတရား အများကြီးကနေဖြစ်စေတယ်။ အစာအိမ်ရောင်တာ၊ အစာဆိပ်သင့်တာလို သိပ်မဆိုးတာနဲ့ ဦးနှောက် ကင်ဆာလို ဆိုးတာကနေလဲ ဖြစ်စေနိုင်ယတ်။ မအန်ခင် ပျို့လာaပမဲ့ ပျို့တိုင်းတော့ မအန်ဘူး။ အန်တာများရင် ဝမ်းလျှောသူတွေလိုဘဲ ဓါတ်ဆားရည်တိုက်ရ သွင်းနိုင်တယ်။ အအန်ပျောက်ဆေး တခါတလေ လိုမယ်။
Vomiting အန်တာနဲ့ Regurgitation အစာအိမ်ထဲကဟာတွေ အထက်ဆန်တာနဲ့မတူပါ။ အန်တာက အင်နဲ့အားနဲ့ အစာအိမ်ထဲက ရှိသမျှကို ထုတ်ပြစ်တာ။ နောက်တမျိုးက အားမပါဘူး။ အန်လို့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တာတွေ ရှိတယ်။
•Aspiration of vomit အန်ဖတ်က အသက်ရှူလမ်းထဲရောက်တာ။ အန္တရာယ်ရှိတယ်။ Reflex အလိုလို တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းနဲ့ ချောင်းဆိုးတုံ့ပြန်မှုကနေ ကာကွယ်ပေးမယ်။ ဒါပေမဲ့ မေ့ဆေးပေးထားသူ၊ အရက် သောက်ထားသူတွေမှာ ဒီအစွမ်းနည်းနေတယ်။
•Dehydration and electrolyte imbalance ရေဓါတ်၊ ဆားဓါတ်နည်းခြင်း အန်တာများရင်ဖြစ်မယ်။ Acid အက်စစ်ဓါတ် နဲ့ Chlorine ကလိုရင်းတွေ နည်းလာမယ်။ Alkaline တွေများလာမယ်။ Hypochloremic metabolic alkalosis လို့ခေါ်တယ်။ Hypokalemia ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ မစားနိုင်ရာကနေ အားယုတ်လာမယ်။ Metabolic acidosis အထိ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။
•Mallory-Weiss tear အန်ဖန်များရင် Esophageal mucosa အစာမြိုပြွန်စုတ်ပြဲတာဖြစ်နိုင်တယ်။
•Dentistry တချို့ဆိုရင် သွားကိုထိခိုက်စေမယ်။
အန်တဲ့အထဲပါတာကို Vomitus (Vomit) အန်ဖတ် ခေါ်တယ်။
•သွေးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ပါတာကို Hematemesis ခေါ်တယ်။ သွေးဟောင်းနေတာပါရင် Coffee grounds ကော်ဖီညိုရောင် အန်မယ်။
•Fecal vomiting အစာဟောင်း (ဝမ်း) လဲပါနိုင်တယ်။ Intestinal obstruction နဲ့ Gastrocolic fistula တွေကနေ ဖြစ်စေမယ်။
•Bright red နီရဲနေရင် အစာမြိုပြွန်ကလာတဲ့သွေး၊
•Dark red အနီရင့်ရောင်နဲ့ သွေးခဲလေးတွေပါနေရင် အစာအိမ်ကနေလာတယ်။
•Coffee ground ကော်ဖီရောင်က သွေးယိုတာသိပ်မများဘူး။ သွေးနဲ့ အစာခြေရည်ကနေ အရောင်ပြောင်းစေတာဖြစ်တယ်။
•Yellow vomit ဝါနေတာက သည်းခြေရည်ပါနေလို့။ သည်းခြေရည်များနေရင် အရောင်စိမ်းမယ်။
•Gastroesophageal reflux disease အစာအိမ် + အစာမြိုပြွန်ကနေ အထက်ဆန်းခြင်း၊
•Pyloric stenosis အစာအိမ်ကနေအောက်ဆင်းတဲ့နေရာ ကျဉ်းနေခြင်း၊ မွေစကလေးဆိုရင် အရေးပေါ်ခွဲကုသရမယ်။
•Bowel obstruction အူပိတ်နေခြင်း၊
•Overeating အစားများခြင်း၊ အန်ထွက်အောင်စားတယ်ဆိုာမျိုး၊
•Acute abdomen and/or peritonitis ရုတ်တရက် ဝမ်းတွင်းမြှေးရောင်ခြင်း၊ အရေးပေါ်ဖြစ်တယ်။
•Food allergies အစား (အလာဂျီ) ဖြစ်ခြင်း၊
•Cholecystitis, Pancreatitis, Appendicitis, Hepatitis ဗိုက်ထဲကအင်္ဂါတွေ (သည်းခြေအိတ်၊ သရက်ရွက်၊ အူအတက်၊ အသဲ) ရောင်ခြင်း၊
•Food poisoning အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊
•Motion sickness ခရီးသွားမူး-အန်ရောဂါ၊
•Ménière's disease (မင်နရီးစ်) ရောဂါ၊
•Cerebral hemorrhage ဦးနှောက်ထဲသွေးယိုခြင်း၊
•Brain tumors ဦးနှောက်အကျိတ်၊
•Benign intracranial hypertension and hydrocephalus ဦးနှောက်ထဲဖိအားများခြင်း၊ အရည်များခြင်း၊
၄။ Hypercalcemia (ကယ်လ်စီယမ်) များနေခြင်း၊
•Uremia ကျောက်ကပ်မကောင်းလို့ (ယူရီယာ) များနေခြင်း၊
•Adrenal insufficiency အဒရီနယ်လ်-၈လင်းမကောင်းခြင်း၊
•Hyperglycemia သကြားဓါတ်များခြင်း၊ ဆီးချို၊
•Morning sickness ကိုယ်ဝန်ရှိစလက္ခဏာ၊
•Hyperemesis ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် အလွန်အန်ခြင်းရောဂါ၊
•Selective serotonin reuptake inhibitors (ဆီလက်တစ်-ဆီရိူတိုနင်-ရီအပ်တိတ်-အင်ဟဘစ်တာ) ဆေး၊
•Chemotherapy drugs ကင်ဆာဆေးများ၊ Entheogens ဆေးများ၊
•Stomach flu အစာအိမ် တုပ်ကွေး၊
•Anorexia nervosa or Bulimia nervosa အစားအသောက်ရောဂါ၊
•Poisoning အဆိပ်သောက်လို့ အန်အောင်လုပ်ပေးရတာ၊
Treatment ဘယ်လိုကုသမလဲဆိုတာ အကြောင်းခံအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။
Home remedies အိမ်မှာဘာလုပ်နိုင်လဲ။ ရေဓါတ်မနည်းစေရဘူး။ ကြည်လင်တဲ့အစာရေစာတွေ သောက်ပါ။ တခါတည်း အများကြီးမသောက်ပါနဲ့။ နွားနို့ကို ၂၄-၄၈ နာရီကြာ ရှောင်ထားသင့်တယ်။ Bananas, Applesauce, Rice, Toast (BRAT diet) ခေါ်တာ စားသင့်တယ်။ ၂၄ နာရီအထိမရပ်ရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ Intravenous fluids သွေးကြောထဲ ဆေးသွင်းရနိုင်တယ်။ ကလေးငယ်တွေက ရေ-ဆားနည်းတာကို ခံနိုင်မရှိကြဘူး။
Antiemetics အအန်ပျောက်ဆေးကို အများအားဖြင့် Motion sickness နဲ့ ဆေးဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးကြောင့် အန်တာအတွက် သုံးတယ်။ Anticholinergics, Antihistamines, Dopamine antagonists, Serotonin antagonists နဲ့ Cannabinoids ဆေးအမျိုးအစားတွေမှာလဲ ဦးနှောက်ကိုသက်ရောက်တာဆင်လို့ အအန်ပျောက်စေတဲ့အစွမ်းရှိတယ်။ အအန်ပျောက်ဆေးတွေက ဆေးပြား၊ ဆေးရည်၊ ထိုးဆေးတွေရှိတယ်။ စအိုထဲကနေပေးနိုင်တဲ့ဆေးလဲရှိတယ်။
Anti-emetic Medicines မြန်နာပြည်မှာ မရှိမဖြစ်သုံး အအန်သက်သာဆေးတွေ -
- Profchlorperazine (E) Tablet 5mg and Oral Liquid 5mg/5ml
- Metoclopramide (E) (hydrochloride) Tablet 10mg and Injection 5mg/ml in 2ml amp
- Cinnarizine (C) (hydrochloride) Tablet 15mg
- Domperidone (E) (maleate) Tablet 10mg and Oral Liquid 5mg/5ml and Suppository 30mg
- Ondansetron (E) (hydrochloride) Tablet 4mg, 8mg and Oral Liquid 4mg/5ml and Injection 4mg/2ml and Suppository 16mg
- Granisetron (C) Tablet 1mg, 2mg and Injection 1mg/ml and Syrup 1mg/5ml and Suppository
• Nausea and Vomiting ပျို့ချင်-အန်ချင် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/02/nausea-and-vomiting.html